घरमै रेष्टुरेन्टको स्वादमा कसरी स्वादिष्ट माछा पकाउने ? यस्तो छ तरिका
Homeरोचक / विचित्रघरमै रेष्टुरेन्टको स्वादमा कसरी स्वादिष्ट माछा पकाउने ? यस्तो छ तरिका
May 10, 2019 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on घरमै रेष्टुरेन्टको स्वादमा कसरी स्वादिष्ट माछा पकाउने ? यस्तो छ तरिका
मानिसहरु अक्सर रेष्टुरेन्टमा आफूलाई मन परेको परिकार खान जाने गर्छन् । सबै रेष्टुरेन्टका खाना स्वास्थ्यका हिसाबले योग्य नहुन सक्छन् । यसर्थ घरमै हरेक परिकार बनाएर खान सकिन्छ ।
माछा पकाउन सबैभन्दा पहिले आवश्यक सामाग्रीहरु जुटाउने । आवश्यक सामग्रीहरुमा माछा, अण्डा, टुक्रा पारेको कागती, नुन, बेसार, लसुन अदुवाको पेष्ट, पानी राखेर पिसेको खुर्सानी, पानी, मैदा, काँचो तोरीको पेष्ट, तिल, जिराको धूलो, खुर्सानीको धूलो र तेल रहेका छन् ।
माछालाई स्लाइस बनाएर काट्ने अण्डा फुटाउने र त्यसमा एक चम्चा चिलि पेष्ट, आधा चम्चा खुर्सानीको धूलो, जिरा पाउडर, लसुन अदुवाको पेष्ट, बेसार, तिल, नुन, तोरीको पेष्ट, २ चम्चा मैदा, कागतीको रस, र पानी राखी राम्ररी मिक्स गर्ने काटेको माछालाई मसलामा डुबाउने र केही बेरसम्म डुबाउने त्यसपछि तातो तेलमा माछालाई राम्ररी पल्टाइ–पल्टाइ फ्राइ गर्ने,फ्राइ गरिसकेपछि तेल तैरने पेपर, कपडा वा भाँडोमा उक्त माछालाई राख्न यसरी स्वादिलो माछा तयार गर्न सकिन्छ ।
रमदानको अवसरमा कतारमा कैदीहरुलाई आममाफी, नेपालीहरुले पनि पाउलान नया जीवन ?
खसीको मासुका परिकारहरु : साँधेको कलेजो देखि खुट्टाको सुप सम्म ! जानीराखौं कसरी बनाउने ?